Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Muqdisho (DAAWO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Muqdisho (DAAWO)
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax nooca gawaarida lagu dhejiyo ah kaas oo ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Taleex iyo km4 ee Magalada Muqdisho.
Gaariga qarxay ayaa waxaa ka dhashay dab kaas oo saameyn ku yeeshay gawaari kale oo yaallay goobta uu qaraxa ka dhacay,waxana warar soo baxaya ay sheegayaan in qaraxa uu ku dhintay wiil dhalinyaro ah kuna dhaawacmay Awoowihiis oo gaariga la saarnaa.
Sidoo kale dad saarnaa gaari Homey ah oo wadada marayay ayaa waxyeelo kasoo gaartay qaraxaas,waxana haatan socota deminta dab ka dhashay gaariga qarxay.
Ciidado ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa goobta ku sugan, kuwaas oo xiray wadada,isla markaana u diidaya dadka iyo gaadiidka intaba.
Somalia: Deadly car bomb kills one in Mogadishu